21 Onye Kenan, bụ́ eze Erad,+ onye biri na Negeb,+ wee nụ na Izrel esiwo n’ụzọ Atarim bịa, o wee malite ibuso Izrel agha wee dọrọ ụfọdụ n’ime ha n’agha.
2 N’ihi ya, Izrel kwere Jehova nkwa, sị:+ “Ọ bụrụ nnọọ na i nyefee ndị a n’aka m, m ga-ebibi obodo ha niile.”+
3 Jehova wee gee ntị n’olu Izrel ma nyefee ndị Kenan n’aka ha; ha wee bibie obodo ha niile. Ha wee gụọ obodo ahụ Họma.+
4 Mgbe ndị Izrel si n’Ugwu Họọ+ jiri ụkwụ na-aga n’ụzọ Oké Osimiri Uhie ka ha gaa nkọnkọ nkọnkọ gafere ala Idọm,+ ike malitere ịgwụ mkpụrụ obi ha n’ihi ụzọ ahụ.
5 Ha wee na-ekwu okwu megide Chineke+ na Mozis,+ sị: “Gịnị mere unu ji kpọpụta anyị n’Ijipt ka anyị nwụọ n’ala ịkpa a?+ N’ihi na nri adịghị, mmiri adịghịkwa,+ mkpụrụ obi anyị akpọwokwa ihe oriri a na-enweghị isi asị.”+
6 Jehova wee ziga agwọ ọjọọ+ n’etiti ha, agwọ ndị ahụ wee na-ata ha, nke mere na ọtụtụ ndị Izrel nwụrụ.+
7 N’ikpeazụ, ha bịakwutere Mozis wee sị: “Anyị emehiewo,+ n’ihi na anyị ekwuwo okwu megide Jehova na gị onwe gị. Rịọrọ anyị Jehova arịrịọ ka o wepụrụ anyị agwọ ndị a.”+ Mozis wee malite ịrịọrọ ha arịrịọ.+
8 Jehova wee sị Mozis: “Meere onwe gị agwọ yiri ọkụ ma konye ya n’elu osisi mgbaàmà. Ọ ga-erukwa na mgbe agwọ tara onye ọ bụla, onye ahụ ga-ele ya anya wee dịrị ndụ.”+
9 Mozis wee jiri ọla kọpa kpụọ otu agwọ+ ozugbo ma konye ya n’elu osisi mgbaàmà;+ o wee ruo na ọ bụrụ na agwọ ataa mmadụ, onye ahụ elee agwọ ahụ eji ọla kọpa kpụọ anya,+ onye ahụ adịrị ndụ.+
10 E mesịa, ụmụ Izrel kwaliri wee maa ụlọikwuu n’Obọt.+
11 Ha wee si n’Obọt kwalie wee maa ụlọikwuu n’Aịye-abarim,+ n’ala ịkpa nke chere Moab ihu, n’ebe ọwụwa anyanwụ.
12 Ha si n’ebe ahụ kwalie wee maa ụlọikwuu n’akụkụ iyi ndagwurugwu Zired.+
13 N’ebe ahụ ka ha si kwalie wee maa ụlọikwuu n’ógbè Anọn,+ nke dị n’ala ịkpa nke malitere n’ókè ndị Amọraịt; n’ihi na Anọn bụ ókè Moab, ya bụ, ókè Moab na ndị Amọraịt.
14 Ọ bụ ya mere e ji kwuo n’akwụkwọ Agha Jehova, sị:
“Veheb nke dị na Sufa, tinyere iyi ndagwurugwu Anọn,
15 nakwa ọnụ ọnụ nke iyi ndagwurugwu, nke gbagọrọ wee chee ihu n’obodo Aa+ ma dịrị n’ókè Moab.”
16 Ha wee si n’ebe ahụ gaa Bia.+ Ọ bụ olulu mmiri a ka Jehova gwara Mozis banyere ya, sị: “Kpọkọta ndị Izrel, ka m nye ha mmiri.”+
17 N’oge ahụ, Izrel bụrụ abụ a,+ sị:
“Gbapụta mmiri, gị olulu mmiri! Bụọrọnụ ya abụ!
18 Olulu mmiri, ọ bụ ndị isi gwuru ya. Ọ bụ ndị a ma ama n’etiti ụmụ Izrel gwuru ya,
Ha ji mkpara onye na-achị isi+ gwuo ya, jirikwa mkpara nke ha.”
Ha wee si n’ala ịkpa ahụ gaa Matana.
19 Ha sikwa na Matana gaa Nahaliel, sikwa Nahaliel gaa Bemọt.+
20 Ha wee si Bemọt gaa na ndagwurugwu nke dị n’ọhịa Moab,+ n’elu elu Pisga,+ ọ dị elu, cheekwa ihu na Jeshaịmọn.+
21 Izrel wee zigara Saịhọn+ eze ndị Amọraịt ndị ozi, sị:
22 “Ka m si n’ala gị gafere. Anyị agaghị ahapụ ya banye n’ọhịa ma ọ bụ n’ubi vaịn. Anyị agaghị aṅụ mmiri si n’olulu mmiri ọ bụla. Ọ bụ n’ụzọ eze ka anyị ga-aga ruo mgbe anyị gafere ókèala gị.”+
23 Ma Saịhọn ekweghị ka Izrel si n’ókèala ya gafere,+ kama Saịhọn kpọkọtara ndị ya niile wee gaa ibuso Izrel agha n’ala ịkpa, wee bịaruo Jehaz,+ malite ibuso Izrel agha.
24 Izrel wee jiri ihu mma agha+ gbuo ya ma nweta ala+ ya malite n’Anọn+ ruo Jabọk,+ n’ebe dị ụmụ Amọn nso; n’ihi na Jeza+ bụ ókè ụmụ Amọn.+
25 Izrel wee weghara obodo ndị a niile, Izrel wee biri n’obodo niile nke ndị Amọraịt,+ ya bụ, Heshbọn+ na obodo nta ya niile.
26 N’ihi na Heshbọn bụ obodo Saịhọn.+ Ọ bụ ya bụ eze ndị Amọraịt,+ ọ bụkwa ya busoro eze Moab agha n’oge gara aga wee nara ya ala ya niile ruo Anọn.+
27 Ọ bụ ya mere ndị na-arọ abụ ịkwa emo ji asị:
“Bịa na Heshbọn.
Ka e wuo obodo Saịhọn, meekwa ka o guzosie ike.
28 N’ihi na ọkụ esiwo na Heshbọn+ pụta, ire ọkụ esiwokwa n’obodo Saịhọn pụta.
O rechapụwo Aa+ nke Moab, ndị nwe ebe ndị dị elu nke Anọn.
29 Ahụhụ ga-adịrị gị, Moab! Unu ga-ala n’iyi, unu ndị Kimọsh!+
Ọ ga-eme ka ụmụ ya ndị ikom bụrụ ndị gbara ọsọ, meekwa ka eze ndị Amọraịt, bụ́ Saịhọn, dọrọ ụmụ ya ndị inyom n’agha.
30 N’ihi ya, ka anyị gbaa ha ụta.
Heshbọn ga-ala n’iyi ruo Daịbọn,+
Ndị inyom ga-ala n’iyi ruo Nofa, ndị ikom ga-alakwa n’iyi ruo Medeba.”+
31 Izrel wee malite ibi n’ala ndị Amọraịt.+
32 Mozis wee zipụ ụfọdụ ndị ka ha gaa ledo Jeza.+ Ha wee weghara obodo nta ya niile, napụkwa ndị Amọraịt bi n’ebe ahụ ala ha.+
33 E mesịa, ha tụgharịrị wee si n’ụzọ Beshan+ gbagoo. Ọg+ eze Beshan wee pụta ibuso ha agha n’Edriaị,+ ya na ndị ya niile.
34 Jehova wee sị Mozis: “Atụla ya egwu,+ n’ihi na m ga-enyefe ya na ndị ya niile na ala ya n’aka gị;+ mee ya ihe i mere Saịhọn, eze ndị Amọraịt, onye bibu na Heshbọn.”+
35 Ha wee gbuo ya na ụmụ ya ndị ikom na ndị ya niile, ruo mgbe ọ na-adịghị onye dị ndụ fọdụụrụ ya;+ ha wee nweta ala ya.+
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D4%26Chapter%3D21%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl